लकडाउन खुले पछि नेपाल आउने सपना बोकेका करवीर मलेशिया मै अस्ताए ! – Sandesh Press
May 27, 2021 443
साथै घरबहाल सरोकार महासंघले कोरोना संकटका बेला घरबेटीले डेरामा बस्नेमाथि गलत व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति समेतजनाएको छ । महासंघले विपतको बेला गलत व्यवहार गर्ने घरबेटीलाई कारवाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ निशब्द छौ। हार्दिक श्र’द्धाञ्जली शो’काकुल परिवारमा गहिरो समवेदना पुर्चौँडी नगरपालिका ९ तल्लादेही सङौडा बसोबास गर्ने करबिर भण्डारी जि को हाल बिरानो मुलुक मलेसियामा २०७८/०२/११ गते बिहान असमायिक नि’धन भएको खबरले परिवार सोकाकुल बनेको छ । हजुरको आत्माले बैकुण्ठमा बास पाओस ! -नवीन बोहरा ले फेसबुक मार्फत लेखेको स्टाटस
Nextयती सानो उमेरमा निस्टुरी बन्यो भगवान, २१ महिने बच्चाको नि,धन
अनितालाई फेरि यसरि रुहाउदै अपरेसन थिएटर लगियो (हेर्नुस् भिडियो )